चितवनमा एक वर्षमा २५ गैँडा मरे – NewsAgro.com
July 19, 2017 newsagro गैँडा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवनमा एक वर्षमा २५ गैँडा मरे
यो समाचार 624 पटक पढिएको
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपास क्षेत्रमा गएको एक वर्षमा विभिन्न कारणले २५ वटा गैँडा मरेका छन् । चितवन निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत एवं सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार २१ वटा गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका भएपनि चारवटा गैँडा भने मानवीय कारणले मरेका हुन् ।
उहाँले अघिल्लो वर्ष विभिन्न कारणले १५ वटा गैँडा मरेकामा यो वर्ष बढेर २५ वटा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “यो वर्ष भने १० वटा बढी गैँडा मरे”, अर्यालले भन्नुभयो, “दुईवटा करेन्ट लागेर, एउटा तस्करबाट र एउटा रौतहटमा गोली लागेर ल्याइएको गैँडा म¥यो । अरु बाँकी २१ वटा प्राकृतिक कारणले मरेका छन् ।”
एउटा गैँडा चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको मेघौली सेराइ होटलले छाडेको करेन्ट लागेर मरेको थियो । अर्को गैँडा पनि नवलपरासीको गैँडाकोटमा करेन्ट लागेर मरेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
अर्को एउटा पश्चिम चितवनको जगतपुरमा शून्य चोरी शिकार वर्षको एक हजार ७१ दिनपछि गएको चैतमा तस्करबाट गैँडा मारिएको हो ।
अन्य २१ वटामध्य एउटा गैँडा बच्चा जन्माउन नसकेर तथा अन्य गैँडा बूढो भएर, जुधेर, अन्य गैँडाले हानेर तथा लडेर मरेका अर्यालले जानकारी दिनुभयो । मरेकामध्ये दुईवटा गैँडामात्रै जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्रमा तथा अरु सबै चितवन निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका घटनामा भएको जनाइएको छ ।
← अब उपत्यकामा पनि गुड्ने भयो ‘स्काई रेल’
राज्यको करोडौं लुट्न खोज्ने मल माफियाको योजना तुहियो ! →
झापामा ‘सुपारी जोन’ कार्यक्रम, ३० लाख बजेट विनियोजन, २० हजार कृषक लाभान्वित
December 10, 2018 newsagro 0
February 4, 2019 newsagro 0
कसरी भयो ? सात दशकअघि ‘हलोक्रान्ति’